Chii chiri kushandiswa kweMC nylon |
Nylon yekukanda ndeimwe yeanonyanyo shandiswa epurasitiki epuriniki, kunyanya muchimakanika chinhu senge inopfeka uye inopfeka-yekudzora zvinhu kutsiva simbi dzisingaite sedzemhangura uye maalloys. Chigadzirwa cheyiloni-makirogiramu mazana mana chine huwandu hunoshanda hwakaenzana nematani 2.7 esimbi kana matani matatu endarira. Izvo zvipenga zvinodzivirira zvikamu zveyikoniyoni zvinoshandiswa kutsiva izvo zvekutanga zvemhangura zvikamu, izvo zvinongogonesa kushanda kwemuchina, zvinoderedza kugadzikana kwekuchengetedza, asi zvakare zvinowedzera hupenyu hwese hwebasa nekaviri kana katatu. Naizvozvo, mutengo wakadzokororwa weakakanda zvinhu zvenaironi zvinhu zvakaderera, uye chitaurwa chacho chakapetwa kanoverengeka pane chisina simbi. Midziyo mikuru ndeiyi: gaskets epurasitiki, machubhu enylon, magasketi enylon, matanda enylon, magiya eniyoni, nylon conveyor rollers, pullon yenylon, nezvimwe.
Panyaya yekugadzira, inogona kukandwa kubva pa0.2 kusvika kumazana emakirogiramu. Nekuda kwemutengo wakakwira wejekiseni michina yekuumba uye mafuru, iko kushandiswa kweiyo nylon ipurasitiki nyowani nyowani yakagadzirwa gore rino. Iyo ine zvakawanda zvinobatsira kupfuura zvakajairwa polyamide (nylon)
1) Yakakwira michina simba, yakakwira kuramba, yakanaka yekupfeka kuramba, yakanyanya kusungunuka poindi, madhaka mafuta, ngura kuramba uye mvura kuramba.
2) Kugadzikana kwechiyero kwakanaka, ihwo hunhu hwekuzvidzora-hunyoro, uye saizi sikero haina kuganhurirwa.
3) Mutengo wakaderera, hurefu hwehupenyu hwakareba, mutengo unongova 50% -70% yesimbi isiri-ferrous, uye nguva yeupenyu inowanzoita 2-3 nguva yakareba kupfuura iyo yesimbi.
MC nylon ine akasiyana akasiyana mafomu ekushandisa, senge turbines, magiya, sikuru tsvimbo uye zvishoma nezvishoma mumatope mahwendefa epamashini pane zvakajairika michina. Pamachina anorema senge shaft sleeve pamichina yekuchera, crusher, matanda ekubatanidza, shaft sleeve, shafts pamakemikari michina, nezvimwewo, impellers pane hydraulic michina. Vanoparadzira mvura pane shongwe dzinotonhora, pisitoni tsvimbo pamotokari dzinotakura, nyuchi dzinoshamba pamichina yekumanikidza, matangi emafuta, zvindori zvekuisa chisimbiso, uye zviridzwa muindasitiri yezviridzwa, kudzivirira michina kuti isapinda mumatangi, nezvimwewo. , chikamu chemagetsi, chikamu chinokanganisa kupesana, chikamu chekumanikidza, chikamu chekushongedza kana chikamu chekushanda, chinorumbidzwa neanoshanda.